I-Toyotomi Hideyoshi Biography
I-Japan Great Unifier, 1536-1598
I-Toyotomi Hideyoshi wazalelwa ngo-1536, e-Nakamura, kwiPhondo lase-Owari, eJapan . Uyise wakhe wayengumlimi welifa / inxalenye yesojoni kwintsapho ye-Oda. Wafa ngo-1543 xa le nkwenkwe yayineminyaka esixhenxe ubudala, yaye umama kaHideyoshi washesha watshata. Umyeni wakhe omtsha wakhonza no-Oda Nobuhide, i- daimyo yesithili se-Owari.
U-Hideyoshi wayemncinci ngenxa yobudala bakhe, obukhuni kunye nobubi. Abazali bakhe bamthumelela ethempelini ukuze bafumane imfundo, kodwa le nkwenkwe yabalekela ifuna ukuzonwabisa.
Ngo-1551, wajoyina inkonzo kaMatsushita Yukitsuna, ukugcinwa kweentsapho ezinamandla zaseMagawa kwisifunda saseTotomi. Oku kwakungavamile kuba bobabili uyise kaHideyoshi kunye noyise-ntambwe-ntliziyo babekade bekhonza i-Oda clan.
UHideyoshi wabuyela ekhaya ngo-1558 waza wanikela inkonzo yakhe ku-Oda Nobunaga, unyana ka-daimyo. Ngelo xesha, umkhosi wama-Imagawa wama-40,000 wawuhlasela i-Owari, iphondo lasekhaya likaHideyoshi. U-Hideyoshi wathatha umdlalo omkhulu - umkhosi we-Oda wabalwa malunga nama-2,000 kuphela. Ngowe-1560, amabutho aseMagawa ne-Oda adibana ne-Okehazama. Amandla amakhulu ka-Oda Nobunaga agxotha amajoni aseMagawa kwisiphango esinemvula, kwaye wafumana inkolelo eyinqabileyo, eqhuba abo bahlaseli.
Igosa ithi uHideyoshi oneminyaka engama-24 ubudala wakhonza kule nkunzi njengoNobunaga. Nangona kunjalo, u-Hideyoshi akabonakali kwiincwadi zokuphila zikaNobunaga kude kube ngama-1570.
Kwiminyaka emithandathu kamva, uHideyoshi wabakhokelela ekuhlaselweni okwathatha i-Inabayama Castle kwi-Oda clan.
UOda Nobunaga wamvuza ngokumenza abe ngumgadi jikelele.
Ngo-1570, uNobunaga wahlasela umninazala wakhe, u-Odani. U-Hideyoshi wayekhokela iinqwelo zokuqala ezintathu zakwa-Samurai eziliqela nganye ngokumelene nenqaba enqatyisiweyo. Umkhosi waseNobunaga wasebenzisa ubugcisa obutsha obubhubhisa beemipu, kunokuba abantu beenkwenkwezi begibele ihashe.
Ama-Muskets ayisebenzisekanga kakhulu kwiindonga zengqungquthela, nangona kunjalo, ngoko i-Hideyoshi icandelo lomkhosi we-Oda lihleli ngokukhawulelana.
Ngowe-1573, amabutho kaNobunaga aye awanqoba zonke iintshaba zawo kuloo ndawo. Ngenxalenye yakhe, uHideyoshi wathola i-daimyo-nqanawa yeemimandla ezintathu kwiPhondo le-Omi. Ngowe-1580, u-Oda Nobunaga wayedibanise amandla angaphezu kwama-31 kumaphondo angama-66 eJapan.
Ngomnyaka we-1582, u-Akechi Mitsuhide u-Nobunaga wajika umkhosi wakhe ngokumelene nenkosi yakhe, ehlasele kwaye eqhubela phambili kwiNqaba yaseNobunaga. Amanqabana adibanisa uNobunaga aye abangela ukubulawa-umama kaMitsuhide. UMitsuhide unyanzelekile uOda Nobunaga kunye nendodana yakhe endala ukuba enze i- seppuku .
U-Hideyoshi wathatha enye yabathunywa beMitsuhide waza wafunda ngokufa kukaNobunaga ngosuku olulandelayo. Yena kunye nabanye oda abaphathi, kuquka uTokugawa Ieyasu, baleka ukubuyisela ukufa kweNkosi yabo. U-Hideyoshi wabanjwa noMitsuhide kuqala, wamxabela waza wambulala e-Battle of Yamazaki emva kwezinsuku ezingama-13 emva kokufa kukaNobunaga.
Ulwaphulo olulandelelwano lwaluqhutywe kwi-Oda clan. U-Hideyoshi uxhasa umzukulu kaNobunaga, u-Oda Hidenobu. U-Tokugawa Ieyasu wakhetha indodana endala endala, uOda Nobukatsu.
U-Hideyoshi unqobile, ufake uHidenobu njenge-Oda daimyo entsha. Kuwo wonke ama-1584, uHideyoshi noTokugawa Ieyasu benza izibambiso eziphakathi, akukho nto iphosakeleyo.
KwiMfazwe yaseNagakute, imikhosi kaHideyoshi yachithwa, kodwa u-Ieyasu walahlekelwa abathathu kubaphathi bakhe abaphezulu. Emva kweenyanga ezisibhozo zale mpi exabisekileyo, u-Ieyasu wamangalela uxolo.
UHideyoshi ngoku ulawula amaphondo angama-37. Ngokudibanisa, uHideyoshi wasasaza amazwe kwiintshaba zakhe ezithintekayo kwiintsapho zaseTokugawa neShibata. Wanikezela amazwe eSamboshi naseNobutaka. Oku kwakungumqondiso ocacileyo ukuba wayethatha igunya egameni lakhe.
U-Hideyoshi uhlangana kwakhona eJapan
Ngo-1583, u-Hideyoshi waqala ukwakha e- Osaka Castle , uphawu lwegunya lakhe kunye nenjongo yokulawula lonke elaseJapan. NjengoNoobunaga, wenqaba isihloko se- shogun . Abanye abathandabuzayo babenokungabaza ukuba unyana welifama angabanga ngokusemthethweni eso sihloko; U-Hideyoshi wathintela ingxoxo enokuhlazisa ngokuthatha isihloko sekampaku , okanye "regent," endaweni yoko. U-Hideyoshi wayala ukuba i-Imperial Palace ilahleke, kwaye yanikezela ngezipho zemali kwintsapho ekhompyutheni.
UHideyoshi wagqiba ekubeni athathe isiqithi esisezantsi saseKyushu phantsi kwegunya lakhe. Esi siqithi sasikhaya kwiindawo zokuthengisa eziphambili apho izinto ezivela eChina , Korea, ePortugal nakwezinye iintlanga zenza iJapan. Uninzi lwe-daimyo kaKyushu wayeguqukele ebuKristwini ngaphantsi kwefuthe labathengisi bePortuguke nabavangeli bezithunywa zevangeli; ezinye zaguqulwa ngamandla, kunye neetempileni zamaBuddha kunye nezikhonkwane zaseShinto zatshatyalaliswa.
NgoNovemba ka-1586, u-Hideyoshi wathumela umkhosi omkhulu eKyushu, unamaqela angama-250,000. Inombolo yedolophu yaseDaimyo yadibana kunye naye, ngokunjalo, akuzange kuthathe ixesha elide lokuba umkhosi omkhulu utshabalalise konke ukuxhatshazwa. Njengesiqhelo, u-Hideyoshi wathatha yonke indawo, waza wabuyela kwiincinci zakhe ezincinci, waza wavuza iintlambo zakhe kunye nezifihla ezinkulu. Walawula ukuba ukuxoshwa kwabo bonke abathunywa bevangeli baseKyushu.
Umkhankaso wokugqibela wokuhlanganisana wenziwa ngo-1590. U-Hideyoshi wathumela omnye umkhosi omkhulu, mhlawumbi abangaphezu kwama-200,000 amadoda, ukuba anqobe indlu enamandla eHojo, eyayilawula indawo e-Edo (eyiTokyo). U-Ieyasu no-Oda Nobukatsu baholele umkhosi, bahlangene nomkhosi wamanqabana ukuze banqabile ukumelana noHojo olwandle. I-daimyo i-daimyo, uHojo Ujimasa, wasuka waya e-Odawara Castle waza wahlala apho ukuze alinde uHideyoshi.
Emva kweenyanga ezintandathu, uHideyoshi wathumela umzalwana ka Ujimasa ukuba acele uHojo daimyo ukuba anikezele. Wenqaba, kwaye u-Hideyoshi uqalise ukuhlaselwa kweentsuku ezintathu, ukuhlaselwa kwinqaba. U-Ujimasa ekugqibeleni wathumela unyana wakhe ukuba anikezele indlu.
U-Hideyoshi wayala u-Ujimasa ukuba enze i-seppuku; wathatha iipoleni waza wathumela unyana kaJimimasa kunye nomzalwana ekuthunjweni. Indlu enkulu kaHojo yachithwa.
Ngomnyaka we-1588, uHideyoshi wayebalela bonke abemi baseJapan ngaphandle kwamaSamamu ukuba babe nezixhobo. Le " Ukukhanga Inkemba " yabathukuthelisa abalimi kunye nama-monks of war, ababesoloko begcina izixhobo baze bathathe inxaxheba kwimfazwe nakwiimvukelo. U-Hideyoshi wayefuna ukucacisa imida phakathi kweendidi zentlalo ehlukeneyo eJapan kunye nokukhusela ukuvuswa kwamakholi kunye nabahlali.
Kwiminyaka emithathu kamva, uHideyoshi wakhipha omnye umyalelo owenqabela nabani na ukuba baqeshe i- ronin , i-wandering masterless samurai. Iidolophu nazo zavalwa ukuvumela abalimi ukuba babe ngabahwebi okanye iingcibi. I-order yoluntu yaseJapan yayiza kusekwa kwitye; Ukuba uzalwe ngumlimi, wafa ngumlimi. Ukuba unamaSamamu ozalelwe kwinkonzo ye daimyo ethile, uhlala khona. U-Hideyoshi ngokwakhe wenyuka esuka kwiklasi yezilwanyana ukuba abe yikampaku. Nangona kunjalo, lo myalelo wokuzenzisa wunceda ukuba kubekho uxolo nokuzinza kwexesha elide.
Ukuze ugcine i-daimyo isheke, u-Hideyoshi wabayalela ukuba bathumele abafazi babo kunye nabantwana kwi-capital city njengamaxhoba. I-daimyo ngokwabo iza kuchitha iminyaka engatshintshiyo kwimifuno yazo nakwi-capital. Le nkqubo, ebizwa ngokuba yi- sankin kotai okanye " ukuhamba okunye ," yahlanganiswa ngowe-1635, yaqhubeka yafika ngowe-1862.
Ekugqibeleni, u-Hideyoshi wayala ukuba kubalo lonke ubalo luluntu kunye nophando lwamazwe onke. Akulingananga kuphela ubuninzi beemimandla ezahlukileyo kodwa kunye noveliso oluzalanayo nolulindelekileyo lwesivuno.
Yonke le ngcaciso yayiyintloko yokwenza irhafu yentlawulo.
Ngomnyaka we-1591, unyana kaHideyoshi kuphela, umntwana omncinane ogama lakhe linguTsurumatsu, wafa ngokukhawuleza, walandela ngokukhawuleza nguHideyoshi u-Hidenaga umntakwabo. I-kampaku yamkela uHidetsugu unyana kaHidenaga njengendlalifa yakhe. Ngo-1592, u-Hideyoshi waba ngu- taiko okanye umhlala phantsi, ngelixa i-Hidetsugu ithatha isihloko sekampaku. Le "umhlalaphantsi" yayigama kuphela, nangona kunjalo - u-Hideyoshi wagcina umphathi wakhe ngamandla.
Ngonyaka olandelayo, nangona kunjalo, isancinza sikaHideyoshi uChacha wazala unyana omtsha. Lo mntwana, u-Hideyori, wamela ingozi enkulu kuHidetsugu; U-Hideyoshi wayenegunya elinamandla lamagada omzimba athunyelwe ukukhusela umntwana kunoma yikuphi ukuhlaselwa ngumalume wakhe.
I-Hidetsugu yakha idumela elibi kulo lonke ilizwe njengendoda enobukhohlakeleyo negazi. Wayeyaziwa ukuba aqhubekele emaphandleni kunye ne-musket yakhe kwaye adulele phantsi abalimi kwimimandla yabo ukuze baqhube. Kwakhona wadlala umqhubi, uguqulela umsebenzi wokuqhayisa abagwebi ngekrele lakhe. U-Hideyoshi akakwazanga ukunyamezela le ndoda eyingozi kwaye engaqinisekiyo, eyabangela ingozi ngokusobala kumntwana u-Hideyori.
Ngomnyaka we-1595, wamangalela uHidetsugu ngokuceba ukumbhuqa, wamyalela ukuba enze i-seppuku. Intloko kaHidetsugu yaboniswa kwiindonga zedolophu emva kokufa kwakhe; ngokukrakra, u-Hideyoshi wabiza nabafazi bakhe, amashweshwe kunye nabantwana bonke ukuba babulawe ngokugqithisileyo ngaphandle kweentombi enye enyangeni enye.
Ubu bunyamelo obugqithisileyo bekungesiye isiganeko esikude kwiminyaka kamva kaHideyoshi. Walalela nomhlobo wakhe nomqeqeshi, umphathi we-tea, uRikyu, ukuba enze i-seppuku eneminyaka eyi-69 ngo-1591. Ngo-1596, wayala ukuba ukubethelelwa kweemithandathu ezithintele iinqanawa ezazisemazweni aseSpain, amaJavaits amathathu eJapan kunye namaKristu angama-17 aseJapan aseNagasaki .
Kuphela kwee-1580 kunye neyokuqala kwee-1590, u-Hideyoshi wathumela inani lezithunywa kuKumkani uSejojo ​​waseKorea, efuna ukuhamba ngendlela ephephile kwilizwe lempi yaseJapan. U-Hideyoshi watshela u- Joseon ukumkani ukuba wayefuna ukunqoba iMing China neIndiya . Umlawuli waseKorea akaphenduli le miyalezo.
NgoFebruwari ngo-1592, ibutho laseJapan elinamandla elinama-140,000 lafika kwi-armada yeenqanawa ezi-2,000 kunye neenqanawa. Ihlasele iBusan, empuma-mpuma yeKorea. Kwiiveki, amaJapan aye phambili kwisixeko-dolophu, eSeoul. UKumkani uSeonjo kunye nenkundla yakhe babalekela ngasenyakatho, beshiya inkunzi-mlilo itshiswe kwaye iphangwe. NgoJulayi, amaJapan ayebanjwe ePyeongyang. Amasosha aseSamrai ayenzima ukulwa awanqumla abakhuseli baseKorea njengekrele ngokusebenzisa ibhotela, ukukhathazeka kweChina.
Imfazwe yomhlaba yahamba ngendlela yeHideyoshi, kodwa ukuphakama kwamanqana aseKorea kwenza ubomi baseYapan banzima. Iinqanawa zaseKorea zinezixhobo ezibhetele kunye nabasemagunyeni abanamava. Kwakhona kwakukho isikhali sesebe-i-iron-clad "iinqanawa zokuhamba," eziye zazingenakuvuthwa kwiJapan yase-Japan. Ukunqunyulwa kwizinto zokutya kunye neebhamu, umkhosi waseJapan wathinjwa kwiintaba ezisenyakatho yeKorea.
Isimemezelo saseKorea i- Sun Sun-sin senze uloyiso olumonakalo kwi-Hideyoshi ye- Battle of Hansan- ngo-Agasti 13, 1592. UHideyoshi wayala ukuba iinqanawa eziseleyo ziyeke ukudibanisa ne-Korea. NgoJanuwari ngo-1593, uMlawuli wase-China wase-Wanli wathumela ama-45,000 amabutho ukuqinisa iiKorea ezilahlekileyo. Ngokubambisana, amaKorea kunye neTshayina baphosa umkhosi kaHideyoshi ePyeongyang. AmaJapan aphengulwa phantsi, kwaye kunye ne-navy yabo engakwazi ukuhambisa iimpahla, baqala ukulamba. Phakathi koMeyi, ngo-1593, u-Hideyoshi waphenduka waza wayalela ukuba abuyele eJapan. Akazange alahle iphupha lakhe lolawulo lwamazwe onke, nangona kunjalo.
Ngo-Agasti ka-1597, u-Hideyoshi wathumela ukuhlasela kwe sibini kwiKorea. Noko ke, ngeli xesha, amaKorea kunye namaqabane abo aseTshayina ayilungele kangcono. Bayeka umkhosi waseJapan eSeoul, baphinde baphoxiswa baya eBusan ngokuqhuba ngokukhawuleza. Okwangoku, i-Admiral Yi yaqalisa ukuphanga iJapan eyayivuselela imikhosi yamanzi.
Isikimu esikhulu sobukhosi baseHideyoshi saphela ngomhla kaSeptemba 18, 1598, xa i-taiko yafa. Ekufeni kwakhe, u-Hideyoshi waphenduka wathuma umkhosi wakhe kule ngqungquthela yaseKorea. Wathi, "Musani ukuvumela amajoni am ukuba abe yimimoya kwelinye ilizwe."
Ukukhathazeka okukhulu kukaHideyoshi njengoko elele ukufa, nangona kunjalo, yayiyiyo yindlalifa yakhe. U-Hideyori wayeneminyaka emihlanu kuphela ubudala, engakwazi ukuthatha amandla kayise, ngoko ke uHideyoshi wamisela iBhunga labaDala abahlanu ukuba babambe njengobungqina bakhe kuze kube yilapho efika. Eli bhunga libandakanya uTokugawa Ieyasu, u-Hideyoshi owodwa. Umdala we-taiko wenza izibhambathiso zokunyaniseka kwonyana wakhe omncinci kwiqela elithile le-daimyo, kwaye wathumela izipho ezixabisekileyo zegolide, izambatho zesiliva kunye neinkemba kubo bonke abadlali bezopolitiko abalulekileyo. Kwakhona wabhenela ngamalungu eBhunga ukukhusela nokukhonza uHideyori ngokuthembeka.
Ibhunga labadala abahlanu lagcina ukufa kwe-taiko kube yimfihlo kwiinyanga eziliqela ngelixa beshiya umkhosi waseJapan waseKorea. Nangona elo shishini lugqibeleleyo, nangona kunjalo, ibhunga laphuka kwiinkampu ezimbini ezichaseneyo. Ngelinye icala kwakuyiTokugawa Ieyasu. Ngenye inxalenye yabadala abane. UIeyasu wayefuna ukuthatha amandla; abanye baxhasa i-Hideyori encinane.
Ngama-1600, loo mabutho amabini afika ekuvutheni kwi-Battle of Sekigahara. U-Ieyasu wathintela waza wazibiza ngokuba ngu- shogun . U-Hideyori wayevalelwe e-Osaka Castle. Ngomnyaka we-1614, uHideyori oneminyaka engama-21 ubudala waqala ukuqokelela amajoni, ukulungiselela ukujongana noTokugawa Ieyasu. U-Ieyasu uqalise ukuvinjelwa kwe-Osaka ngoNovemba, ukumphoqa ukuba ahlaziye kwaye asayine isivumelwano sokuthula. Ngentwasahlobo elandelayo, uHideyori wazama kwakhona ukuqokelela amabutho. Ibutho laseTokugawa liqalise ukuhlaselwa ngokupheleleyo kwi-Osaka Castle, ukunciphisa amacandelo ukuze kukhishwe i-cannon kunye nokubeka isigodlo somlilo.
U-Hideyori nonina benza i-seppuku; Indodana yakhe eneminyaka ezisibhozo yafunyanwa yimikhosi yaseTokugawa yanyuka ikhanda. Yayikuphela kwendlu yaseTototomi. I- shoguns yaseTokugawa yayiza kulawula iJapan kude kube nokubuyiselwa kwe- Meiji ka-1868.
Nangona isizukulwana sakhe singasindanga, impembelelo kaHideyoshi kwenkcubeko yaseJapane nezopolitiko yayininzi. Womeleza isakhiwo seklasi, wadibanisa isizwe esingaphantsi kolawulo oluphambili, kunye neendlela ezininzi zenkcubeko ezifana nomkhosi weti. U-Hideyoshi wagqiba ukuhlanganiswa okuqalwe yinkosi yakhe, uOda Nobunaga, ukubeka isigaba sokuthula nokuzinza kweTokugawa Era.
Ngaba yayinguSinbad uMninimzi onyanisekileyo?
Iingcali ze-Biology I-Phagia neSigaba
I-Anglicism ne-Anglicism eJamani
Iimfundiso zeBhayibhile malunga nenkululeko
Imithetho kaManuel (iManava Dharma Shastra)
Iinkcukacha Ezifutshane Ngentaba yaseKenya
Abafundi beekholeji zeBard
Yintoni i-Burlesque Literature?
Inkqubo yeNdlela ye-Inca - ii-25,000 iifayile zeNdlela ezixhuma i-Inca Empire